March 08, 2017 – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane, Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo), ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dalka Jarmalka u qaabilsan Soomaaliya iyo Kenya, MRS. Jutta Frasch
Madaxweynaha ayaa Amb. Jutta Frasch kala hadlay sidii dib loogu soo nooleyn lahaa xiriirkii taariikhiga ahaa ee labada dal.
Madaxweynaha ayaa sheegay in Dowladda Soomaaliya ay diyaar u tahay wax wada qabsigii iyo iskaashigii ballaarnaa ee u dhaxeeyay labada dal, xilligaana ay aad uga muhiimsan tahay marxaladihii la soo maray.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale kala hadlay danjire Jutta Frasch abaaraha dalka ka jira iyo sida ay muhiim u tahay in Dowladda Jarmalka gacan ka gaysato gurmadka dadka ay aafeeyeen abaaraha.
Jutta Frasch, ayaa sheegtay in ay dib u soo celin doonto Dowladda Jarmalka mashaariicdii ay horey uga fulin jirtay Soomaaliya, sida dib u dhiska adeegga waxbarashada, gaar ahaan dugsiyadii farsamada gacanta, tababarrada xirfadaha dhallinyarada iyo ka qayb-qaadashada kor u qaadidda Tayada ciidammada booliska Soomaaliya.
March 9, 2017 tuugahaladilo2015